Dhul muran weyn ka taagnaa oo maanta lagu wareejiyay guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dhul muran weyn ka taagnaa oo maanta lagu wareejiyay guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka (SAWIRO)
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa maanta dhul kasoo horjeeda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku wareejiyay guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinka Qaranka, kaas oo la sheegay inuu muran aad u balaaran ka taagnaa.
Dhulkaasi oo baaxadiisa ay dhan tahay 1,680-mitir isku wareeg ah ayaa sida la sheegay laga dhisi doonnaa xarunta guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka, waxaana dhulkaasi maanta lagu dhawaaqay in la gudoonsiiyay guddigaasi oo ay madaxda u tahay Xalimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey), kuwaasoo la sheegay inay haatan ku shaqeeyaan madaxtooyada Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo ka hadlay goobtii dhulka lagu bixiyay ayaa sheegay in dhulkaan ay bixisay dowladda hoose ee Soomaaliya, islamarkaana ay ku shaqeeyn doonaan guddiga doorashooyinka Qaranka.
Wuxuu gudoomiye Yuusuf Madaale tilmaamay in uljeedka guddiga loo siiyay dhulkaan ay tahay in shacabka iyo siyaasiyiinta dowladda ka madax banaan, ay fursad u heelaan inay la macaamilaan guddigaan oo u xil-saaran hirgelinta doorashada qof iyo cod ah, taas oo la filaayo in dalka ay ka dhacdo sanadka 2020-ka.
Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliimo Yareey oo iyadane goobtaasi ka hadashay ayaa sheegtay in guddiga uu dhisan doono dhulka la siiyay ayna dhismaha dhulkaasi maal-gelin doonaan dowladda Japan iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta mashaariicda oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahdo UNDP.
Ugu dambeyntii, dhulkaan ayaa sida la sheegay xilligii uu guddoomiyaha ka ahaa gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaa laga burburiyay dadweyne badan oo xilligaasi halkaasi deganaa, waxaana markii xilka gobolka Banaadir uu la wareegay gudoomiye Muungaab, wuxuu dhulkaasi siiyay madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo muran aad u weyn oo in muddo ah soo jiitameysay ka dhalatay.